Tag: otomaatiga | Martech Zone
Isbedelka Dijital ah iyo Muhiimadda isku dhafka Aragtida Istaraatiijiyadeed
Talaado, Febraayo 16, 2021 Talaado, Febraayo 16, 2021 Carter Hallett
Mid ka mid ah xirmooyinka lacagta yar ee dhibaatada COVID-19 ee shirkadaha ayaa ahaa dardargelinta lagama maarmaanka u ah isbeddelka dijitaalka, oo soo maray 2020 65% shirkadaha sida laga soo xigtay Gartner. Hore ayay usocotay tan iyo markii ganacsiyada adduunka oo dhami ay doorteen habka ay u wajahayaan. Maaddaama masiibada ay dad badan ka ilaalisay is-dhexgalka fool-ka-foolka ah ee dukaamada iyo xafiisyada, ururrada noocyadooda kala duwan ayaa macaamiisha uga jawaabayay adeegyo dijitaal ah oo aad ugu habboon. Tusaale ahaan, jumladleyda iyo shirkadaha B2B
Tani waa, shaki la'aan, jawiga ganacsi ee aan caadiga ahayn iyo mustaqbal shaki leh oo aan goobjoog u ahaa intaan noolahay. Taasi waxay tiri, waxaan daawanayaa qoyskeyga, asxaabteyda, iyo macaamiishayda oo u kala baxa dhowr wado: Cadho - tani waa, shaki la'aan, tan ugu xun. Waxaan daawanayaa dad aan jeclahay oo aan ku ixtiraamo xanaaq kaliya oo aan ku dhaleeceynayo qof walba. Ma caawinayso waxba iyo cidna. Kani waa waqtigii naxariis lahaan lahaa. Curyaannimo - dad badan ayaa sugaya